10 may 2013 - Fante Online
Friday Sermon: Spread the Message of Islam to the Hispanics - 10th May 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Esusuowketseaba 10, 2013.
(Friday sermon – 10th May, 2013 – Fante Translation)
HOM NTRƐ ISLAM NO NKƆ AMAN A WƆKA SPAIN ANAA PORTUGAL KASA (HISPANICS).
Hadhrat Khalifatul Masih kaa ne Fida Nyamesεm no fii Baitul Hameed Asɔrdan no a ɔwɔ Chino, California. Ɔkaa dɛ yesi no ewur dɛ ɔyɛ Nyame Ne pɛ a Islam bedzi nkunyim. Ahmadiyya nnyɛ dza ogyina n’anan do fi Islam ho, nokwar nye dɛ ɔno nye nokwar Islam no na nokwar Islam no nye Ahmadiyya. Sɛ hɛn atotoananmufo rekrantse dɛmara dɛ yɛnnyɛ Muslimfo mpo a, anamɔn biara a yɛtu no dzi ho dase dɛ Nyankopɔn nye hɛn wɔ hɔ dɛ yɛyɛ Okuw. Iyi ma hɛn awerɛhyɛmu dɛ Nyankopɔn nye hɛn wɔ hɔ, na sɛ nokwar Islam nkyerɛkyerɛ wobohu no beebi ndɛ mber yi a, wohu no fi Nkɔnhyɛnyi Krɔnkrɔn (NNN) ne boonyi nokwarfo no a ɔwɔ etuhoakyɛ a otsim no ne nkyɛn hɛn mber yi mu Imam no, Messiah no a Nyamkopɔn nam Ne nkɔnhyɛ do soma no dɛ ɔmbakenyan Islam no. Islam nokwar asɛm wɔahyɛ ato hɔ dɛ wɔnam no do bɛtrɛtrɛ, wɔ bea a Muslimfo wɔ hɔ anaa wonnyi hɔ. Ɔnnkɛkyɛr biara nna wiadzemba eehu dɛ Ahmadiyya Kuw nkotsee na ogyina Islam n’ananmu.
Hadhrat Khailfatul Masih nye dawurbɔ krataa bi a wɔfrɛ no Los Angele Times ne ɔkyerɛwfo bi dzii mbisase. Ɔbaa ɔkyerɛwfo no bisaa dɛ ɔda edzi dɛ hɛn dodow suar na ɔyɛ dɛ hɛn nka nntahye papa, ɔbɛyɛ dɛn ma hɛn kuw yi a yɛda edzi dɛ ɔno nye nokwar Islam yi dze Islam asomdwee nsɛm yi atrɛ wɔ Americaman mu.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa kyerɛɛ no dɛ “Nnyɛ dɛ yɛdze asɛm no retrɛ Americaman mu nko bi. Nokwar nye dɛ yɛdze bepitse Americaman mu nye amanaman nkaa no nyainara, na ɔyɛ Nyankopɔn Ne pɛ a dabi yebedzi hom akoma na hom adwen do nkunyim ɔnye hom akaekyirmba dze aba Islam mu”. Ɔyɛɛ n’adwen mu konsee dɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a ɔbaa ɔkyerɛwfo yi dze bɛba dawurbɔ krataa no mu pɛpɛɛpɛ na mbom ɔakenkan ehu dɛ ɔkyerɛɛw no dɛ mbrɛ ɔsɛ. Nokwar nye dɛ, wɔdze tsipia na mboa abɔ Anohoba Messiah (ANN) no anohoba dɛ mbrɛ wɔdze bɔɔ Akɔmhyɛfo edzikanfo no. Nyankopɔn Ne ndzeyɛɛ kyerɛ da no edzi mber nyinara na yɛgye dzi pi dɛ: Allah ahyɛ ato hɔ dɛ: “Ampaara dɛ, Mebedzi nkonyim, Emi na M’asomafo” (58:22). Nyankopɔn dze asɛm kor yi ara ama Anohoba Messiah (ANN) awerɛhyɛmu na ampaara Ɔbɛhyɛ no mã osiandɛ Ɔasoma Anohoba Messiah (ANN) dɛ ɔmbɔtow Islam nkyerɛkyerɛ no mpetse wɔ hɛn mber yi mu. Ɔnnkɛba no dɛ Nyankopɔn nnkɔ boa eso Ɔnnkɔwowaw nyia Ɔasoma no dɛ ɔnkɔtow No Som mpetse.
Anohoba Mesiah (an) kaa dɛ: Nyankopɔn ahyɛ ato hɔ wɔ asɔpɔn no ara na Oesi no awur dɛ ɔyɛ ne mbra (law) na Ne Ntɔyɛɛ dɛ Ɔno na N’akɔmhyefo bedzi nkunyim aber biara. Susuampara dɛ meyɛ no nkͻnhyɛnyi na Noara somaa me yi, mbom menndze mbra (Shariah) fofor, nhyehyɛɛ fofor anaaso dzin fofor bae. Mbom me nam Nkɔmhyɛnyi (NNN) ne dzin mu aba. Nkɔmhyɛfo nyinara hͻn nsͻwano na ne ndaedzi. Dɛm ntsi na meka dɛ mbrɛ ɔtse wɔ tsetsebaado no ɔno nye dɛ ofi Adam ber do kodu Nkɔmhyɛnyi Krɔnkrɔn (NNN) ber do no kuran mu nyiyimu yi ahyɛ ma, dɛmara ara so wɔbɛhyɛ no ma ama me. (wͻkyerɛɛ ase fii Tafseer ul Qur’an, vol IV krataafa 329-330). Anohoba Mesiah (an) kyerɛɛw so dɛ: ana dɛm nkorɔfo yi botum asɛe Nyankopɔn Ne nhyehyɛɛ a Nkɔmhyɛfo dzi ho dase fi ahyɛse no, a woennyi no tokyen? Ɔnntse dɛm ara da, nokwar nye dɛ Nyankopɔn No Nkɔnhyɛ rebɛba mu dɛ “Allah esi no ewur”. Ampaara dɛ Mebedzi nkunyim, Emi na M’asomafo. (wɔkyerɛɛ ase fii Tafseer ul Qur’an Vol. Iv, krataafa 330).
Hadhrat khalifatul Masi kaa dɛ n’adwen mu nnyɛ no konsee ketseketse mpo na mma Ahmadiyyanyi nokwarfo biara so n’adwen mu nnyɛ no konsee dɛ hɛn kuw yi bɔhwer Nyankopɔn No mboa. Ɔwɔ dɛ ɔda edzi pefee ma Ahmadiyyanyi biara adze a wɔfrɛ no nkunyimdzi n’ase kyerɛ. Ana ɔwɔ tum wɔ aban no tum do? Ana ɔbɛma Ahmadiyyafo ayɛ ɔdodow wɔ ɔman biara mu. Iyinom so nye nkunyimdzi ahorow ebien no. Sɛ ehwɛ a ihu dɛ Nyankopɔn Ne Ntɔyɛɛ (Sunna), nkunyimdzi gu mu ahorow ebien: ne fa kor hyɛ ma wɔ ne nkwa ndamu na ne nsamu, na ɔfa kor no so ɔhyɛ ma wɔ ne wu ekyir ber a wɔreda ne nkyerɛkyerɛ edzi. Anohoba Messiah kyerɛ edzi. Anohoba Messiah kyerɛɛw: Na dɛ ebɔkrɔn no n’ase hye dɛ Asomafo (am) na Akɔnhyɛfo nya pɛ dɛ wɔdze Hujjat bɔbɔ adze wɔ wiadze yi mu na obiara nnkotum esi no ban ntsi, Nyankopɔn so dze No tum nsɛnkyerɛdze kyerɛ hɔn nokwardzi nna nokwar a wɔpɛ dɛ wɔtow petse wiadze. Ɔma wodua nokwar no n’aba (The Will pp.5). Aba no ne dua no kyerɛ dɛ wiadze mba hu dza ɔfa no Nyankopɔn wɔ a ɔwɔ hɔ eso wohu nsɛnkyerɛdze na atɛnyi a ɔnam Nyankopɔn N’adom soronko do wɔdze ama no na obiara renntum nye Nkͻmhyɛnyi ne nyimdzee na n’adzehu nndzi esi.
Yɛkɔ do ka dɛ wɔda nokwardzi ho nsɛnkyerɛdze edzi. Ɔkɔmhyɛnyi n’atamfo botum adɔr naaso wɔnnkotum ebu no ɔtorfo dabiarada. Ampaara, Nkɔmhɛnyi Krɔnkrɔn (NNN) n’atamfo ennya asɛnyi na nkyerɛasee a wɔdze maa Anohoba Messiah (ANN) a nna hɔn a wosi no bam no enntum annka no annhyɛ wɔ ne nkwa ada mu nna wonntumii so bɛpem ndɛ. Ansaana wimu nsɛnkyerɛdze a ɔfa no bosoom na ewia ho rebesi no, hɔn a wɔfrɛ hɔnho Ulema kyerɛɛ dɛ nna wohia. Naaso, ber a dɛm nsɛnkyerɛdze yi sisii no, wɔkyerɛ ase dɛ mbrɛ hɔnara wɔpɛ wɔ akwan ahorow mu. Asaase wosow na nsɛnkyerɛdze pii sisii na hɔn a wɔmmpɛ dɛ wɔgye dzi no anngye enndzi. Naaso nkorɔfo a wɔyɛ ahotseweefo kɔr do ara dɛ wɔrebɛhɛn kuw no mu. Nyankopɔn no Nkɔmhyɛnyi ma nkyerɛkyerɛ pa a ɔda edzi fi ber to ber. Iyi saso na osii a ɔfa no anohoba a wɔbɔ ma Anohoba Messiah (as) na duaba no odua no renyin prɔmprɔmm. Nkorɔfo kumaabi na wɔyɛɛ Bai’at wɔ no nkwa ber mu mbom ɔyɛɛ kunyundzi maa no ma nsɛnkyerɛdze pii sisii a ofua no ekyira nna obiara enntum nnye no enndzi egyinanan wɔ ho wɔ adwen mpiwii mu.
Nkunyindzi a ɔtɔ do ebien no ɔba Ɔkɔmhyɛnyi no no mu ekyir mbom ɔyɛ no ndwumma no ntoado. Atamdo dween dɛ nkɔnhyɛnyi no enya ne beebi kɔ no na n’akaadofo no wobotum asɛɛ hɔn ho wɔnam ewurkadze kwan do atoto hɔn amam mu no obiara nnyi hɔ a ɔbɛgyegye hɔn do bia. Dɛm na Anohoba Messiah n’atanfo wo dwenee. Mbom Anohoba Messiah no aka no dadaw dɛ obedzi nkunyim dɛ mbrɛ Akɔmhyɛfo no a wodzii kan no na nkunyimdzi no bɔkɔ do ara ekodu ber a Nyankopɔn N’anohoba nyinara ahyɛ ma. Ɔkaa dɛ no wu ekyir no mma nkorɔfo nndzi awerɛhow osiandɛ duaba no a oduaa no ekyir yi obenyim abɛyɛ dua a ɔbɔsow aba a iyi nam Nyankopɔn Ne Nsɛnkyerɛdze a ɔtɔ do ebien no bɛba mu, ɔno nye khilafat (Adzedzi no) Ɔnam dɛ Nkɔmhyɛnyi no nkunyimdzi ne fabi si wɔ no wu ekyir no, Ahmadiyya kuw ruhu nkunyimdzi a ɔtɔ do ebien mbrɛ esi rehyɛ ma. Okuw no bedzi nkunyim a ɔfa no nyimpa dodow mu, mbom Anohoba Messiah dze dwumadzi pii hyɛɛ hɛn nsa ama yɛahɛn nkunyimdzi yi mu bi fi mber santsen to santsen.
Dɛm dwumadzi yi tse dɛ ma Kuran Krɔnkrɔn kyerɛ hɛn no ara: dɛ yebedzi Taqwa do, yɛasakyer hɛn “su”, yɛ bɔdwen hɛn sunsum na eyiedzi tsebia mu Nkɔnahyɛnyi “Krɔnkrɔn (NNN) dɛ ɔbɛkyekyer Nyankopɔn N’aheman wɔ asaase yi do na ɔama wiadze yi shirk (dɛ edze obi aka Nyankopɔn ho) tokyɛn. Ɔkaa dɛ ͻyɛ Otumfo Nyankopɔn ne pɛ dɛ Ɔbɔtwe hɔn a wɔtsetse mbeambea ahorow nyinara, sɛ Europe O anaa Asia O, hɔn a wɔyɛ tsenenee no kɔ Nyankopɔn No koryɛ ho na Ɔka N’asomafo nyinara kɛhyɛ gyedzi kor ase. Iyi nye Nyankopɔn No botae a wɔasoma me wɔ wiadze. Dɛm ntsi hom so wɔmfa ayɛmuyie, tseneneeyɛ na mpaabɔ a no mu yɛ dzen mfa dɛm kwan yi do (The Will pp.8-9).
Ngyinado a wɔdze fa nkorɔfo ba nokwar som no nye iyinom: Tabligh (Nsɛmpatrɛ), ɔbrapa nwansanwansa no mbɔɛe, enam mpaabɔ do hwehwɛ Nyankopɔn no mboa. Obiara a ɔyɛ Ahmadiyyanyi no a ɔka kɔ Anohoba Messiah (ANN) no noho no wɔ dɛ ͻtse dɛm dwumadzi yinom ase ama no so o’eedua no do ahyɛ botae a ɔnam do ma Anohoba Messiah (ANN) bae no ma. Hεn mbɔdzenbɔ wɔ iyi ho no yε adom a Nyankopɔn dze ma hεn no ne fa kumaabi. Dεm no so, sε yεannyε hεn asεdze a, yεbɔhwyer nhyira a wɔdze ma hɔn a wɔyer hɔn hɔ dzii botae yinom ho dwuma.
Nokwar nye dε, ndɔbaa yi nam Nyankopɔn N`adom do ba, Ɔno a aber biara Ɔka hɔn a N`enyi gye hɔn ho no fua, sε Ɔdze obinom gyina hͻ a , Ɔka hɔn atamfo nyinara gu na Ɔma nyia Ɔama no gyinabew no tu mpon . Sε yeyi iyi si nkyɛn mpo a, wɔhyε hεn dε yεmbɔ hεnho mbɔdzen wɔ iyi ho. Nyankopɔn akasa afa hɔn a wɔwɔ mbɔdzenbɔ ho su dε : Na woana na onyim kasa kyɛn obi a ɔfrε nyimpa kɔ Allah hɔ na ɔyε ndzeyεεpa na ɔka dε , Ampaara meka ahobrasefo no ho ?(41:34) Ɔno nye efrε nkorɔfo kɔ Allah hɔ, ndwumapa ,itua ntoboa a odzi wɔ Allah ,na ntoboa a ɔyε nyimpa dze , setsie mapa wɔ Nyankkopɔn Ne mbransεm no ho, yεnam hεn ahoɔdzen do hyε hεn ntoboa ma osiandε yerunntum nndzi wɔ Allah nyim wɔ Tabligh gyedε hεn ndzeyεε nye Nyankopɔn Ne nkyerεkyerε ko do na yεnnhwε N`enyigye ho ber a yeredzi dεm dwuma no.
Ahmadiyyafo sua wɔ hɔn ehyiadze ase dε wɔbεma hɔn gyedzi edzi adɔntsin akyεn wiadze nsεm hɔ . Ɔwɔ dε yεdze hεn ndzeyεε suo iyi mu dzen. Sε Adzedzifo (Khulafa) to wiadze taferεw-banyin-mbɔ mu anaaso sε Hadhrat Khalifatul Masih ka kyerε wiadze dε yεbɔbɔ mbɔdzen biara a yebotum dze asεm no ako wiadze na dabi yεdze wiadze abɔ mu kor a, nna ogyina adwentsen do dε okuwmba hɔn sunsum mu gyinabew botu kafo na wɔbɛma Anohoba Messiah (ANN) no botae no akrɔn eso akɔ do. Ɔyε nokwar dε Nyankopɔn aka dε ɔwɔ dε yenya nkroɔfo bi a wonya Nyamesεm ho nyimdzii na wɔtow asεm no pitse hɔnara hɔn nkorɔfo do , eso gyedzinyi biara wɔhyε dε ɔfrε nkorɔfo kɔ Nyame nkyɛn. Sε nsεmpatrεfo atɔ sin a , yεnnkotum atweɔn dε yεbεka nyamesεm . Ɔwɔ dε wɔtsetsew ekuwekuw wɔ beebiara a wobotum edzi dεm dwuma yi. Nyame N`adom ntsi, yεwɔ Ahmadiyyafo wɔ ɔman biara mu a wɔabɔ agye Tabligh do na wɔsεe hɔn mber wɔ ho.
Yεwɔ dεm nkorɔfo yi wɔ Americaman mu , mbom wɔka dε ɔnam ɔman no ne sikasεm ntsi ɔwɔ dε wɔyer hɔn ho yε edwuma papaapa ; dεm ntsi wɔdan wiadze dodow. Mbom Hadhrat Khalifatul Masih ehyia nkorɔfo wɔ ha a ɔnam Nyame N`adom ntsi wɔtɔ kɔ gyedzi do kyɛn wiadze ndzεmba do a ɔyε hu. Ɔkaa dε iyi maa ɔbɔɔ mpaa ma hɔn. Oehyia nkorɔfo kumaabi a wodzi gua nketsenketse na ma ɔkeka ho naaso wɔfa iyinom ara mu ka nyamesεm . Mbom wɔdze nkrataa a yetsintsim no wɔ Spain kasa mu dzi dwuma; na sesieara dze ɔyε hɔn pε dε nkyε wobenya nsεmpatrεfo a wɔka Spain kasa a wɔwɔ nyimdzii wɔ nyamesεm mu. Okuw yi nam n`ahoɔdzen do robɔ mbɔdzen a obotum, ɔyε Nyankopɔn Ne pε a. Mbom sε Jama`at binom hia dεm ndzεmba yi a wɔmfa sunsum nhyε mberεntsε no mu ma wɔnkɔ Jamia Ntsetseebea.
Dεm nkanyan na atsenka yi yεnnhu no wɔ hɔn a wɔedzi nda wɔ Ahmadiyya mu nko, mbom yɛhu no wɔ Ahmadiyyafo a hɔn enyi efir so mu. Hadhrat Khalifatul Masih ehu iyi so wɔ mbrɛntsɛ mu. Obi a ɔabɛyɛ Ahmadiyyanyi a ofi bea a wɔka Spain anaa Portugal kasa a ɔyɛ dɛ ɔtse Bay Point afamu hyiaa Khalifatul Masih na ɔdze nkenyan soronko bisaa mbrɛ ɔbɛyɛ ma wɔdze Islam som no bodu nkorɔfo enyimenyim yi ara. Ɔkaa dɛ onyim Bible mu ɔha ne nkyekyɛmu eduanan na orusua Kuran Krɔnkrɔn no mu adwenkyerɛ ma mbisase. Hɔn a wɔayɛ Ahmadiyya akyɛr na wɔmmfa hɔn adwen nnkɔ iyi do no nhyɛ no nsew.
Ahmadiyyanyi fofor no kaa dɛ, nkorɔfo redan hɔnho ma Kristiansom ho, mbom nnyɛ Nyankopɔn ho. Ohia dɛ yɛkɔ kan kɛhyɛ tokur yi ma. Ohia kɛsekɛse dɛ yɛka Nyamesɛm. Khalifatul Masih huun dɛm atsenka wɔ dɛm Ahmadiyyanyi fofor yi mu no, no so ɔyɛɛ no ehiadze ma ͻaka akyerɛ Ɔsɔfopanyin (Missionary-in-charge) no dɛ ɔnyɛ nhyehyɛɛ wɔ iyi ho; ɔnye Ameer no so akasa Ekuwekuw a wɔyɛ aboafo no nye Jama’at no nyɛ pampam suomu na wɔnye nhyehyɛɛ wɔ Waqfe Arzi ho na wonsi nketsi nyɛ edwuma dzen wɔ mbeambea a kwan ebuebue no. Odzi mu papaapa dɛ wɔdze Ahmadiyya, nokwar Islam no bɔkɔ mbeambea a wɔka Spain anaa Portugal kasa no. ndzɛmba ama no mu do ekodu mpɛnpɛndo a nnyɛ dza ohia nye yɛbɛyɛ dɛm nyienyim yi. Nyankopɔn ebueibuei asɔr pii a ɔyɛ hu, nnyɛ Americaman mu nko mbom wɔ America Anaafo ɔman bi a wɔfrɛ no Guatemala.
Ahmadiyyanyi bi a ofi Guatemala nye Hadhrat Khalifatul Masih edzi ehyia. Ɔyɛ Tabligh edwumayɛnyi a no dɔ wɔ edwuma yi ho kɔ kan yie, na oebisa dɛ wɔmma ne nsa nka nkrataa a wɔakyerɛw no wɔ Spain kasa mu a ɔno wɔka no wɔ America Anaafo. Hɛn nkrataa wɔ Spain kasa mu no wɔtsintsim no wɔ Spain. Aber a wɔkaa mbɔdzenbɔ a wɔrobɔ no wɔ Spain ntsi ɔmfa nkrataa a wotsintsim no wɔ Spain ndzi dwuma no ͻkaa dɛ sɛ wͻrohwɛ hͻn dodow yɛ ͻpepe anan a nna hͻn a hͻn dodow yɛ ɔpepe ahanan a wɔka Spainish kasa wɔbɛyɛ hɔn dɛn wɔ Los Angeles mansin yi mu ha. Sɛ hɛn mu kor biara dze no ho gye edwuma yi mu a, nsakyer kɛse na ɔbɛba mansin yi mu. Nsakyer ba wɔ aber a dɔm nyinara dze hɔn ho bɛgye mu na wɔaboa.
Ampaara dɛ ɔyɛ Nyankopɔn nhyehyɛɛ dɛ Ɔdze nkunyimdzi bɛba na ɔgye dɛ yɛdze hɛn ho bɛgye mu bi. Dɛm ntsi Ahmadiyyanyi biara ɔwɔ mansin yi mu nkaa dwumadzi yi ho bi. Obinom gyina hɔnara hɔn mberɛwyɛ do ka dɛ bea yi yɛ wiadze yi mu afɛɛfɛwdze bea. Hɔn a wɔwɔ bea yi do no mmfa Nyamesom ho hwee, dɛmara dͻm dodow bi so a wɔwɔ ha retweͻn hɛn. Dodow noa Hazrat Khalifatul Masih redwen asɛm yi ho no dɛm saso ho ɔhyɛ m’akoma mu dɛ annyɛ a Islam no mpontu wɔ Ameriɔaman mu no befi dɛm mansin yi mu. Mma yɛmmfa hɛnara hɛn mberɛwyɛ nsusu dom a wɔwɔ ha yi. Jama’at edzibewdzifo nyɛ nhyehyɛɛ bi ma dɛm mansin yi (a wɔdze bɛka Nyamesɛm) na sɛ hom wɔ nhyehyɛɛ dadaw a, ɔno hom mfa nyɛ edwuma.
Asɔr yi mu nkorabata ahorow (Khuddam, Lajna nye Ansar) mbɔ hɔn ho mbɔdzen, dɛmara so na Ahmadiyyanyi biara a ɔwɔ nkwaado ha ndzi dwuma mfa ho. Eso ɔyɛ ɔman yi nyinara hɔn asodzii dɛ wɔbɛyɛ nhyehyɛɛ afa mansin yi ho. Ɔwɔ dɛ yɛdze hɛn adwen si enyisom a Anohoba Messiah (ANN) nyaa no do. Onnyi dɛ yɛyɛ hɛn adwen dɛ yɛsuar, yɛayɛ Bai’at ntsi iyi ara ye ma hɛn. Ekyingye biara nnyi ho dɛ, sɛ Ahmadiyyanyi yɛ Bai’at a, nna ne gyinabew edzi mu. Ogyedzinyi mapa nye obi a ɔkɔ do nya mpontu na ɔma n’asotsie tu kafo. Yɛ wɔ nyimpa pii wɔ hɔ a hɔn edzikanfo gyee Ahmadiyyat too mu na wɔbɔɔ afɔr nwanwanso.
Ɔyɛ nhyɛ ma hɔn ekyirmba dɛ wɔdzi hɔn afɔrbɔ nyi na ɔyɛ hɔn enyisͻ. Iyi yɛ kwan a wɔbɛfa do enya hɔn mpanyimfo hɔn mpaabɔ. Mber kakra yi mu no, nkorɔfo bi a asetsena ayɛdzen ama hɔn wɔ hɔnara hɔn man mu no etu amantu aba ha. Ɔman yi mu aban no ama asetsena mu ndzenoa a wɔennya no wɔ hɔnara hɔn man mu mpo, naaso wɔdze hɔn kɔ atseetsee mu. Nkorɔfo yi aba aman yi mu osiadɛ wɔyɛ Ahmadiyyafo, dɛm ntsi ɔwɔ dɛ wɔyɛ dansewa wɔ hɔn asetsena mu. Hɔn a wɔrohwehwɛ asetsena wɔ ha na wonnya edwuma a wɔyɛ no dɛm ntsi wɔwɔ ɔhaw mu no, mbɔ hɔnho hɔnho dɛ wɔbɛhwehwɛ edwuma ayɛ n aber biara a wobenya no wɔmfa nkyekyɛAsɔr yi ho dawurbɔ nkrataa. Sɛ etse fie a nya abagura. Iyi bɛma wɔafi dɛm gyinabew yi mu na Nyankopɔn so beyi hɔn efi ahokyer gyinabew yi mu.
Hadhrat Khalifatul Masih kɔ do kyerɛɛ Anohoba Messiah (ANN) no enyisom a ɔwɔ asɔrmba ho. Wɔtsew asɔr yi dɛ yɛbenya gyedzi ntomu wɔ Nyankopɔn mu. N’adwendwen ho na ɔma gyedzi ntomu, dɛm ntsi na ohia dɛ yɛbɛkan Kuran mber biara na y’adwendwen no mu nsɛm no ho. Sɛ y’annkenkan Anohoba Messiah (ANN) no, no nwoma no a na yɛrobɔ hɔn ho abor. Afei gyedzi so nam nsɛnkyerɛdze do tu mpon. Anohoba Messiah (ANN) no nyaa nyikyerɛ dɛ, dom kɛse noara bɛba wo nkyɛn fir ekyirekyir nye mbeambea pii. Yehu dɛm yikyerɛ yi dɛ ahyɛ ma wɔ ɔnoara n'aber do na siesieara so yɛhu no wɔ Jalsa ber wɔ ɔman biara mu. Ndɛ so mpo nyimpa fifi mbeambea ahorow aba dɛ wɔrebɛyɛ asɔr wɔ Khalifatul Masih a ɔts do yi ekyir. Iyi nyinara kyerɛ ɔdɔ a wɔwɔ ma Anohoba Messiah (ANN) no. Sɛ obi a ɔhwɛ adze yie hu iyi, na nyia no dwen asɛm ho na ɔdwen ho yie a, obohu dɛ Nyankopɔn tsease na obenya gyedzi ntomu wɔ Jama’at yi mu.
Nsɛnkyerɛdxze kor so a Anohoba Messiah (ANN) no akyerɛ nye dɛ nyimpa no benya dɔ kɛse ama Nyankopɔn wɔ aber a wɔayɛ Bai’at. Ɔkaa dɛ Nyankopɔn asoma nokwarfo wɔ hɛn aber yi do na wɔahyɛ no dɛ ɔnkyekyer kuw bi a wɔdɔ Nyankopɔn. Ɔwɔ dɛ yɛhwɛ hɛn abrabɔ mu hwɛ dɛ yɛridzi dɛm mbransɛm nyinara do anaa. Sɛ nnyɛ dɛm a, na hɛn gyedzi wɔ famu na Nyankopɔn pɛ dɛ yenya gyedzi ntomu. Anohoba Messiah (ANN) no kaa dɛ, me nyim dɛ Nyankopɔn bɛyɛ hɛn mboa sɛ yɛfa kwan pa do a, na yɛtsiatsia Nkɔnhyɛnyi n’anamɔn mu a, na yɛdze Kuran ne nkyerɛkyerɛ yɛ hɛn abrabɔ mu fasusu a, na yɛdze kɔ nyɛɛ do a ɔnnkɛyɛ hɛn anofanfa kɛkɛ. Sɛ yetum yɛ dɛm a, ɔno sɛ wiadze nyinara mpo ka hɔn ahoɔdzen bɔmu dɛ wɔdze resɛe hɛn a, woronntum nsɛe hɛn osiandɛ Nyankopɔn bɛka hɛn ho. Na sɛ yɛannyɛ setsie ama Nyame na yɛnye No twa nkitahodzi mu a, ɔno onnhia ɔtanfo biara na onnhia nhyehyɛɛ biara so. Ɔno Nyankopɔn Noara bɛsɛe hɔn.
Anohoba Missiah no ka dɛ, hom nhwɛ yie na hom mfa nyame suro akwan nantew dɛ mbrɛ Nyankopɔn pɛ, sɛ annyɛ dɛm a, ɔno ara bɛsɛe hom osiandɛ ɔbɛyɛ dɛ hom agye nokwar atomu na ekyir no hom apoow no wͻ ndzeyɛɛ mu.
Mma hom mmfa nnhyehya hom ho dɛ hom ayɛ Bai’at kɛkɛ. Gyedɛ hom fa Nyamesuro mapa. Ɔno hom nnkɛnya nkwagye. Nyankopͻn nnyɛ obiara no busuanyi na ͻnngye obiara ne ntamugyina ntomu. Ɔno ara na ɔbɔɔ hɛn atamfo na ɔbɔɔ hɛn so, gyedzi kɛkɛ nnkɛya mfaso gyedɛ hɛn kasa na hɛn ndzeyɛɛ yɛ kor. Anohoba Mɛsia (ANN) no ka dɛ, dɛ obi botwe noho efi bɔn ho no ndzi mu nnwie, mma hɛn asͻrmba mmfa hͻn ho nnto iyi do. Mbom wͻmper dɛ wɔbɛdzi mu wɔ dwumadzi na mpaebɔ mu. Ɔnye dɛ hom nnyi bɔn akwa na hom nyɛ tsenenee. Hom nkyerɛ ahobrase na hom nhyɛ som yi nokwor ma wͻ hom subanpa na ahotsewee kwan do. Iyi nye m’afotu a medze ma hom, dɛm ntsi hom nkae no aber biara. Hɛn kuw yi bɛdzi yie wɔ ber a dza ɔwɔ hɛn mu na dza ɔwɔ hɛn enyido bɛyɛ kor dɛ mbrɛ hɛn kasa nye hɛn ndzeyɛe bɛyɛ pɛ. Sɛ yɛdze dɛm nkyerɛkyerɛpa yi ma afoforfo a wɔwɔ hɛn mu na yɛfa hͻn dɛ wɔyɛ hɛn ara hɛn dze na yɛyi mpaapaamu fi hɛn mu ama yɛafa hͻn dɛ wɔyɛ enuanom.
Americanfo ebibirfo pii aba Ahmadiyya kuw yi mu. Naaso ibinom pii wɔ hɔ a wɔatsew hɔn ho. Siantsir a wɔyɛ Pakistanfo ho nye hɔn nndzi efutuw sakra. Wɔma hɔn Islam nkyerɛkyera naaso hɔn ara nndzi do. Ɔwɔ mudɛ hɔn a wɔatsew hɔn ho no yɛ tsibɔn.
Anohoba Messiah no ka dɛ, Nyankopɔn nndͻ hɔn a wͻhyɛ atar akɛse fɛɛfɛw no, mbom hͻn a wɔtu hɔn ho ma No som na wɔma hɔn gyedzi bor wiadze yi mu biribiara do, iyinom na wɔwɔ Nyankopɔn No dɔ. Dɛn ntsi hom ndwen iyi ho, mma hom ndwen wiadzi yi ho. Nyankopɔn aka dɛ “na yɛbɛma hɔn a wodzi w’ekyir no edzi nyim wɔ etsiafo no hɔn do akapem wusoɛrda (3:56).
Ɔwɔ mu dɛ m’ekyirdzifo bedzi nyim wɔ atamfo do naaso dza ɔwɔ dɛ yɛdwen ho nye dɛ nnyɛ obiara a wɔayɛ Bai’at no na ɔyɛ m’ekyirdzinyi mapa. M’ekyirdzinyi nye obi a odzi mbransɛm nyinara do dɛ mbrɛ ɔfata wɔ ahobrase mu na otsiatsia m’anamɔn mu. Iyi kyerɛ dɛ Nyankopɔn ahyɛ dɛ mentsew kuw a wɔdze ɔdɔ bɛyɛ setsie ama me na oeedzi m’ekyir. Iyi ma me awerɛhyɛmu na ɔma m’awerɛhow yɛ enyigye. Nyankopɔn ahyɛ bɔ dɛ Ɔbɛma dɛm nkorɔfo yi epue wɔ me kuw yi mu kɔpem atsembuada, wɔama me dɛm nyimpa yi wɔ mber a abɛsenkɔr na ɔkɔ do ara dze dɛm nyimpa yi dom me. Eso ɔwɔ dɛ yenya gyinabew a Anohoba Messiah (ANN) no hwehwɛ dɛ yenya no. Yɛserɛ Nyankopɔn ɔnyɛ hͻ; na ɔmma yenhu Ahmadiyya nkunyimdzi no bi wɔ hɛnara hɛn aber yi do.